Somaliland oo ka Jawaabtay Digniinta Britain
Isniin, Bisha Shanaad 02, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 11:15
Xafiiska Arrimaha Dibadda u qaabilsan Boqortooyada Ingiriiska ayaa ka Digay Khatar cusub oo muwaadiniinta reer galbeedka kaga soo fool leh Somaliland, waxaana xafiisku sheegay inay jirto khatar gaara oo la ogyahay inay ku wajahantahay muwaadiniinta ka soo jeeda wadamada Reer galbeedka ee jooga Somaliland.
Britain aya dadka u dhashay dalkeeda ee ku sugan Somaliland ugu baaqay inay dhakhso uga baxaan.
Xukuumadda Somaliland oo arrintaa ka jawaabeysay ayaa xalay hadal ay soo saartay waxa ku sheegtay Inaanay la qabin xukuumadda Britian cabsida amni ee ay muujinayso
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar Ayaa sheegay in Somaliland amaankeedu uu sugan yahay oo aaney jirin wax walaac ah ay xukuumadiisu ka qabto khatar dhinaca amaanka ah oo ka timaada Somaliland.
Waribixinta Jawaabta Soomaalind oo dhameystiran halka hoose ka dhageyso.
Warbixinta Jawaabta Somaliland ee Britain